लघुकथा : छोराको प्रेम « Janata Samachar
लघुकथा : छोराको प्रेम
प्रकाशित मिति : 13 March, 2019 4:21 pm
गाउँको भतभती मन पोल्ने गरिबी र त्यो गरिबीले बलियो बनाएको शरीर अनि नि.मा.वि.सम्मको शिक्षा लिएर उ गाउँबाट शहर हानियो । शहरमा हण्डर ठक्कर खाँदै जीवन संघर्ष गर्दै अगाडी बढ्यो । उ एक सफल व्यापारी बन्न सफल भयो । पहिले दुखै दुखले खिइएको उसको परिवार सम्पत्ति सँगसँगै मोटाउँदै जान थाल्यो । उ नेपालको परिप्रेक्षमा नवधनाढ्य बन्न सफल पनि भयो ।
एक जना भुमी व्यापारिकी छोरीसँग उसले लगनगाँठो नि कस्यो । उसका लालाबाला नि भए । आमाले उसलाई गर्भे टुहुरो हुर्काएकी थिइन्, दुनियाँको मेला पात गरेर । आमा उतै गाउँ मै थिइन् । वनको चरो वनको ढुङ्गोू बनेर आफ्नै दुख जिलो मेलो अर्म पर्ममा । उ पनि शहरका आवश्यकता पूरा गर्दागर्दै शहरमै रुमल्लिएको थियो ।
खोइ के भयो उसलाई ? यसपाली आमाको याद आयो दसैंमा । दसैं मनाउन उसले गाउँ जाने निधो गर्यो र गाउँ गयो । गाउँमा गएर उसका छोरा छोरी साह्रै रमाए । गाउँको, गाउलेको र हजुरआमाको निस्वार्थ माया पाएर बुढी आमालाई पनि के चाहियो र ? घरभरी नाति नातिना भए आमा त्यसै खुसिले गदगद । दसैंको टिकाको दिन उसले आमासग फोटाहरु नि खिच्यो । नातिनातिनालाई काखमा राख्न लगाएर नि फोटो खिच्यो । बुढी आमाका खुसिले आँखा रसाए । अब यिनै नाति नतिनाको काखमा मर्ने निधो गरिन आमाले । दसैं नि सकियो उ आफ्नो स)परिवार शहर तिर लाग्यो ।
गाउँको धुलाम्य सडकमा कार उडाउँदै बुढी आमाका आशाहरु नि त्यही धुलोसँगै उडे । साता दिनपछि एउटा सेतो कार आएर आँगनमा रोकियो । आमा छोरो पो लिन आएछ भनेर नजिक आइन । तर त्यो कारबाट एक अधबैंसे मानिस ओर्लेर भन्यो, ‘आमा तपाईका छोरा बुहारीले तपाईलाई असाध्यै माया गरेर सुविधा सम्पन्न वृद्धाश्रममा राख्नका लागि बन्दोबस्त मिलाएर मलाई पठाएको हुन। ल जाउँ हिड्नुहोस ।
ल्यापटप बोकेर हिडेकी छाेरी दुई दिनसम्म घर नफर्केपछि…
बालिका हराएको जानकारी प्रहरीलाई गराए पनि बालिका नभेटिएको परिवार स्रोतको भनाइ छ ।
‘संसदमा पहिलो पाइला’ विमोचित
समाज बदल्न चाहनेले सबैभन्दा पहिले आफू बदलिनु जरुरी छ । पुस्तक युवापुस्ताका लागि निकै नै
ससार बदल्न हिंडेकाहरू संसार नबदलिंदै आफैं बदलिए !
जानकी गाउँपालिकामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एककाे मृत्यु भएकाे छ ।
‘एक मनले भन्छ अपमान भएको छ,…
खेम बम काठमाडौं । अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीका निर्वतमान अध्यक्ष रञ्जित तामाङले आफूमाथि अन्याय भएपनि मुलुकको हित र ठूला वामघटकको एकताकालागि बलिदानी…
हतियारसहित २४२ पक्राउ
प्रहरीले २ सय ४२ जनालाई हतियारसहित पक्राउ गरेको छ ।
बिहान५ः०० स्टेशन आइडी–राष्ट्रिय गान५ः०२ योग दर्शन–एरोबिक्स५ः२५ दर्शन दिग्दर्शन५ः५५ विज्ञापन–प्रोमो६ः०० जनता समाचार६ः३० तीर्थ पर्यटन६ः५५ विज्ञापन–प्रोमो७ः०० जनता समाचार७ः३० सन्दर्भ८ः०० अंग्रेजी समाचार८ः३० ज्योतिषपथ…
२०७६ जेठ ९ गतेको राशिफल
मेष– कामको व्यस्तता बढ्नेछ । राजनीतिक भेट हुनेछ ।वृष– वैदेशिक फाइदा मिल्नेछ । ठूलाबडाले साथ दिनेछन् ।मिथुन– अवरोधको सिर्जना हुनेछ…
अमेरिकी राजदूतको संवादप्रति नेता नेपालको असन्तुष्टि
पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरीले ‘जनतासँग गफगाफ’ संवाद कार्यक्रम संचालन गर्न लागेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।
‘विधेयकले लोकतन्त्र चिन्दैन, प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित…
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले विधेयकले स्वतन्त्रता संकुचन पार्ने बताउनुभएको छ ।
पत्रकारलाई दश लाख जरिवाना अनुचितः गौतम
लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमततर्फ
मध्यराति घरमा आगलागी : तीन जनाको जलेर मृत्यु
अज्ञात व्यक्तिद्वारा महिलामाथि धारिलो हतियार प्रहार
भारतीय लोकसभाको मत गणना शुरु, मोदीको पार्टी ४ गुणाले अगाडि
‘एक मनले भन्छ अपमान भएको छ, अर्को मनले…’(अन्तर्वार्ता)